★Le Robinet Igumbi langasese. 3 amaminithi ukuya e-Hue Citadel★ - I-Airbnb
★Le Robinet Igumbi langasese. 3 amaminithi ukuya e-Hue Citadel★
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, i-Vietnam
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Linh
U-Linh Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela Ekhaya Lami - Le Robinet homestay :)
Igumbi langasese Elihle elinombhede olingana nendlovukazi eyenziwe ngokwezifiso onomatilasi we-latex wemvelo kanye nokulala okunethezekile kokulala kwakho okungcono kakhulu.
Itholakala ekhoneni elinokuthula ngaphakathi kwedolobha lase-Imperial, umndeni wethu ukude nesiphithiphithi futhi useduze nempilo enokuthula. Hola umoya ohlanzekile, nambitha ukudla kwasebukhosini kwe-Hue Citadel, jabulela ukubukwa okuhle nokungenisa izihambi okufudumeza inhliziyo nsuku zonke.
Ukuhlala njengalokho ofuna ukukwenza ekhaya.
Sawubona, singuPhuc noLinh.
Sinegumbi lokuphumula elithandekayo, ikhishi elifudumele, igceke elikhulu kanye nevulandi yokubuka enhle, oyofuna ngokuphelele ukuyibeka kusofa, ukufunda izincwadi, ukupheka, ukuphuza noma ukushaywa umoya engadini.
Indlu yami iseduze kakhulu ne-Imperial City (imizuzu emi-5 ngokuhamba), i-1km ukuya emfuleni i-Huong, imizuzu eyi-10 ngebhayisikili ukuya eThien Mu Pagoda.
Uma ufuna okokuzithokozisa kwe-Vietnamese yokuhlala ekhaya kodwa usajabulela ukunethezeka nenkululeko yokuhlala ehhotela kusho ukuthi lokhu kungokwakho.
Ukukhululeka njengekhaya lakho! Sifuna ukuba yingxenye yesikhathi sakho lapha edolobheni laseHue.
4.82 · 83 okushiwo abanye
Ngakho-ke ufuna ukuhlela uhambo oluhle kakhulu e-Hue? Udinga indawo enhle yokuhlanganyela? Ingabe kufanele uvakashele amasayithi omlando? Ukudla okuyintandokazi kwendawo? Vele ubuze futhi sizimisele ukukunikeza iseluleko esingcono kakhulu sohambo oluhle.
Ngakho-ke ufuna ukuhlela uhambo oluhle kakhulu e-Hue? Udinga indawo enhle yokuhlanganyela? Ingabe kufanele uvakashele amasayithi omlando? Ukudla okuyintandokazi kwendawo? Vele ubuz…
Hlola ezinye izinketho ezise- Thành phố Huế namaphethelo